ဗဟုသုတ – Page 4
October 12, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
လိုအပ်ရင်အလွယ်တကူပြန်ရှာနိုင်အောင် Shareထားလိုက်ပါ။ဒီနည်းကတော့ တကယ်ကိုလန်းပါတယ် မိမိတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်စေ သားသမီးပဲဖြစ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတိုင်းကို ခိုးနားထောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် မိဘတွေအနေနဲ့လည်းယခုခေတ်သားသမီးတွေကို ဒီနည်းလေးအတိုင်းလုပ်ထားသင့်ပါတယ်Call recorderနဲ့Google drive ကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်ကိုယ်ခိုးနားထောင်မဲ့သူရဲ့ဖုန်းမှာလုပ်ပေးရမှာပါ gmailအကောင့်တစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ် ပထမဆုံးသင်ခိုးနားထောင်လိုသူရဲ့ဖုန်းမှာ သင်သိတဲ့gmailကိုထည့်ထားပါပြီးရင် ကျနော်ပေးထားတဲ့ app ၂ခုကိုသွင်းပါ အပုံတွေမှာ No-1 No-2 တပ်ပေးထားပါတယ်တစ်ဆင့်ချင်းကြည့်လုပ်ပါ သင်ခိုးနားထောင်လိုသူဖက်မှာcall recorder ကိုသွင်းပေးထားရပါမယ် သင့်ဖက်ကတော့google drive ကိုသွင်းထားရပါမယ် သင်နားထောင်လိုသူဖက်မှ call recorder မှာဖမ်းယူထားသမျှကိုသင့်ရဲ့ google drive ကို sync လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် sync လုပ်ဖို့အတွက် သင်နားထားလိုသူရဲ့ဖက်မှာအင်တာနက်လိုပါမယ် သူ့ဖက်ကဖမ်းယူထားသမျှကိုအင်တာနက်ရှိချိန်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုSync လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ home screen မှာ call recorderကြီးဟာကားကားကြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ဒါကိုဘယ်လိုဖျောက်မလဲအကျင့်တန်အကြံရှိတဲ့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့သာဖျောက်ကြလော့ ဆရာတစ်ကွက်စားမယ် […]
ဖိုမ ဆက်ဆံစဉ် အမျိုးသမီးများ ရဲ့ ရှားပါးလွန်းတဲ့ အထွဋ်အထိပ်အရသာ ခံစားမှုကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ…
October 11, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
ယနေ့ခေတ်၏ တွေ့ကြုံရ အများဆုံးသော လူတိုင်း၏ ဆန္ဒသည် ချစ်မှုရေးရာတွင် ကောင်းမွန်သော ဖိုမ ဆက်ဆံမှု တစ်ရပ်အတွက် စနစ်တကျ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ကျေနပ် သင့်သလောက် မကျေနပ်ရသည်များကို တွေ့ကြုံနေကြရသည်။ ကျေနပ်မှု အမြင့်ဆုံးအဆင့် (အထွဋ်အထိပ်) အရသာသို့ ရောက်ရှိခြင်းသည် အလိုအလျောက် ရောက်ရှိလာရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပျိုးယူမှသာ ရနိုင်သည့် ကျေနပ်မှု အရသာ ကောင်းမျိုး ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် သာမန် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဖြင့် ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့သည့် တိုင်အောင် သူမ၏ လိင်ဆက်ဆံဖေါ် အနေဖြင့် ကျေနပ်မှု ရချင်မှလည်း ရနိုင်ပေမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူမအနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှု၏ အရသာထူးကို အပြည့်အ၀ ခံစားတတ်သော အပြုအမူ မရှိခြင်းသည် တစ်ဖက် အမျိုးသား အတွက် […]
ခါးပိုက်နှိုတ်သမားများရဲ့ ခါးပိုက်နှိုတ်ပုံနည်းအမျိုးအမျိုး (ရုပ်သံ)
myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
အများပြည်သူ သတိထား ရှောင်ကျင်နိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါညည်။ ခါးပိုက်နှိုတ်သမားများရဲ့ ခါးပိုက်နှိုတ်ပုံနည်းအမျိုးအမျိုး (ရုပ်သံ) အများသိရှိစေရန် share ပေးကြပါအုံး ခါးပိုက်နှိုတ်သမားများရဲ့ ခါးပိုက်နှိုတ်ပုံနည်းအမျိုးအမျိုး
မင်္ဂလာဦးညကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိ စီနီယာ မမတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေ
October 10, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
မင်္ဂလာဦးည ဟာ အမိုက်ဆုံးည ဖြစ်နေရမယ်လေ သင့်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို စိတ်ကူး ယဉ်ဖူးပါသလား။ မင်္ဂလာဦးည ကို စိတ်ကူး မယဉ်ဖူးပါဘူးလို့ ငြင်းကြရင်တောင်မှ လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲ ကတော့ မိန်းကလေး တိုင်းရဲ့ စိတ်ကူး ထဲမှာ ကြီးစိုးထားတဲ့အတွေးစတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ မင်္ဂလာဦးည ဆိုတာနဲ့ သင်တို့ စိတ်ကူး ယဉ်ထားသလို နှင်းဆီပွင့်ဖက် တွေ ကျဲဖြန့်ထားတဲ့ ဖဲမွေ့ယာကြီးရယ်၊ မွှေးပျံ့လန်းဆန်းနေတဲ့ ရေချိုးကန် ကြီးရယ်၊ နောက်ပြီး အရမ်းချစ်ခင်စုံမက်နေပြီး ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ အချစ်စိတ် တွေရယ် စိတ်ကူး ထဲကအတိုင်း ထပ်တူကျနေမယ်လို့ တွေးဖူးပါသလား။ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဆိုတာနဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဆိုတာကလည်း ရင်ချင်းဆက်အမြွှာညီအစ်မတွေလို တစ်ပူးတွဲတွဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင် မယ့် ကောင်မလေး တွေအတွက် ဗဟုသုတရဖို့ မင်္ဂလာဦးည […]
October 7, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
​ယောက်ျား – “ဟယ်​လို…မိန်းမ​ရေ..ဒီ​နေ့ည…မောင်အစည်းအဝေးရှိလို့ ​အိမ်​ပြန်​နောက်ကျမယ်..သိလား” မိန်းမ – “အင်းပါ..​မောင်​ရယ်​။ မောင့် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြဖို့ထင်တယ်။ မောင်ဝယ်လာတဲ့..​ရေ​မွှေးပုလင်းနဲ့ နှုတ်​ခမ်းနီဘူး​တွေ ဘီရိုထဲမှာ မေ့ကျန် ခဲ့တယ်​​နော်​” ​ယောက်ျား – “ဟို..အဲ..အဲဒါက​လေ” မိန်းမ – “ရပါတယ်​..​မောင်​ရဲ့။ ညဘက်​ ကြီး ခင်​တစ်​​ယောက်​တည်းမအိပ်​ရဲလို့ ဟိုဘက်​ခန်းက ​မောင်​​မောင့်​ကိုအ​ဖော်​ ​ခေါ်ထားပါ့မယ်​။ ​မောင်​ပြန်​လာတဲ့ထိ​ပေါ့​နော်​..ခင့်​တွက်​ စိတ်​​မပူပါနဲ့။ ကားငှားရခက်​ရင်​..မနက်​မှပြန်​ခဲ့​” 0ိာန်​ 🙂 0ိာန်​ 🙂 0ိာန်​ 🙂 ရပါတယျ​..​မောငျ​ရယျ​ !! ~~~~~~~~~~~~~~~~ ​ယောကျြား – “ဟယျ​လို…မိနျးမ​ရေ..ဒီ​နညေ့…မောငျအစညျးအဝေးရှိလို့ ​အိမျ​ပွနျ​နောကျကမြယျ..သိလား” မိနျးမ – “အငျးပါ..​မောငျ​ရယျ​။ မောငျ့ အစညျးအဝေးမှာ တငျပွဖို့ထငျတယျ။ မောငျဝယျလာတဲ့..​ရေ​မှေးပုလငျးနဲ့ နှုတျ​ခမျးနီဘူး​တှေ ဘီရိုထဲမှာ […]
ယနေ့ခေတ်ဖုန်းသုံးတဲကသူတွေ ရှက်တတ်ရင် ဒီစာကို လုံးဝ မဖတ်လိုက်ပါနဲ့..။မရှက်တတ်မှ စာကို ဆက်ဖတ်ပါ။
October 5, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
အနောက်နိုင်ငံတွေကFacebook ဆိုတာကို ထွင်ပေးလိုက်တယ်ဖုန်းဆိုတာကို ထွင်ပေးလိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ ဒီနေ့အထိ စာအုပ်ဆိုင်တွေ ရာင်းကောင်းတုန်းပဲ .. စာအုပ်စာပေကို ဖတ်ကောင်းတုန်းပဲ …. စာအုပ်တိုက်တွေ အလုပ်ဖြစ်တုန်းပဲ … စာရေးဆရာတွေ အာင်မြင်တုန်းပဲ… ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ စာအုပ်ဆိုင်ဆိုတာ အငြိမ်းစားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားလောက်လာကြတယ် ။ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ သရဲခြောက်မှာတောင်ကြောက်ရတယ် ။ ရပ်ကွက်ထဲက စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်ကုန်တယ် ။ စာပေထုတ်ဝေရေးတွေ တွက်ခြေမကိုက်လို့ ပိတ်သိမ်းကုန်ကြတယ် ။ စာရေးဆရာတွေမှာ နာမည်သာရှိတယ် ။ ချမ်းသာဖို့ဝေးစွ ချာင်လည်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်… တချို့သော လူငယ်ဆိုသူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ […]
October 4, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံများ လိင်မှုဘ၀ကို အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားနိုင်ခြင်းကကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်အဖော်ကြားမှာပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်တွေရဲ့ ချစ်ခရီးကိုသမားရိုးကျ ဘောင်တွေထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ခုပြောမယ့် လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံစံတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လိင်မှုဘ၀ကို ပိုပြီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။ ၁။ မြန်ဆန်စွာဆက်ဆံခြင်း မြန်ဆန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဟာသွေးထဲမှာAdrenalieဟော်မုန်းကိုရုတ်တရက် အများကြီးတက်စေပါတယ်။ အဲဒါကကိုယ်ရောကိုယ့်အဖော်ကိုပါ ငလျင်တစ်ခုလိုလှုပ်ခတ်သွားစေနိုင်ပြီးဆက်ဆံမှုအပြီးမှာဒူးတွေ အားနည်းပြီး ဖြစ်ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက် ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ့်အဖော်ကိုကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိတပ်မက်တယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာ ဖြစ်လို့ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးကိုလည်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေတယ်။ တစ်နေကုန် စိတ်ဖိစီးမှုအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်လည်းသိပ်မယူ၊ အ၀တ်အစားတွေတောင် ချွတ်မနေတော့ဘဲ မြန်ဆန်တဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်ခြင်းကဆေးတစ်ခွက်သောက်ရသလိုကိုယ့်ကိုရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ချောဆီတခုခုဆောင်ထားဖို့တော့ မဖြစ်မနေလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သရုပ်ဆောင်ပြီးဆက်ဆံခြင်း ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ ခြားနားတဲ့ စရိုက်ပုံစံမျိုးသရုပ်ဆောင်ပြီးဆက်ဆံခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ လိင်မှုဘ၀ပျော်ရွှင်မှုကို နောက်တစ်ဆင့် […]
အပျိုပေါက် ကျောင်းသူလေး များနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ
အပျိုပေါက် ကျောင်းသူလေး သုံးယောက် ကျောင်းသွားတက်ရာ လမ်းခုလတ်ရှိ အိမ် တအိမ်တွင် ကြက်တူရွေး တစ်ကောင် မွေးထားသည်။ထိုကြက်တူရွေးသည် ထိုမိန်းကလေး သုံးယောက် အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်သွားတိုင်း အရောင် ၃ ရောင် ကို ရွတ်လေ့ ရှိသည်။နေ့တိုင်းရွတ် နေတော့ မိန်းကလေး သုံးယောက်လဲ သတိ ထားမိ လာတော့သည်။တနေ့တွင်သေချာ နားထောင် ကြည့်လိုက်ရာ ‘အ၀ါ၊ အနီ၊ အနက်’ လို. ရွတ်နေသည် ကို ကြားမိ လိုက်သည်။မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သွား စဉ်းစားမိသည်မှာ ဒီအရောင်ဟာ သူမရဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အရောင် ပါလား လို့ သဘောပေါက်လာပြီး ကျန်နှစ်ယောက် ကိုပြောပြသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်က လက်ခံ […]
အမျိုးသမီးများ ဘဝပျက်နိုင်လို့ သတိထားရမယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်
October 3, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်ဝတ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာကဒ်ကို ပေးခဲ့တယ်။သူမကလဲ သဘောရိုးနဲ့လို့ ထင်မှတ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့ လိပ်စာကဒ်ကို လက်ခံပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်လို့ မောင်းထွက် ခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီယောက်ျားဟာ တခြားလူရည်သန့်ယောက်ျား တစ်ဦးမောင်းတဲ့ ကားပေါ် တက်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်ထဲကနေ ကားမောင်း ထွက်လာတဲ့ သူမဟာ သူမရဲ့ ကားနောက် ကနေ စောစောက ယောက်ျားက တချိန်တည်းမှာပဲ နောက်ယောင်ခံ ကားမောင်း လိုက်လာတာကို နောက်ကြည့်မှန်က တဆင့် […]
တစ်ခါတစ်လေ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရေချိုးပြီးရင် အလျင်စလို အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီလိုမျိုးဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အန္တာရာယ်ရှိပါတယ်။ FemCare ရဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Jason James က “ရေချိုးပြီးတာနဲ့ အဝတ်အစားမဝတ်ခင်မှာ လိင်အင်္ဂါအပြင်ဘက်အပိုင်းကို ကိုယ်သုတ်ပဝါနဲ့ညင်သာစွာ သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ လိင်အင်္ဂါနားတစ်ဝိုက်မှာ စိုစွတ်နေတဲ့အတိုင်းအဝတ်အစား အလျင်စလိုဝတ်လိုက်မိရင် မှိုစွဲတဲ့ရောဂါဖြစ်လာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ James က “အကယ်၍ သင်က ရေချိုးပြီးကာစမှာ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် စိုထိုင်းမှုကို ပိတ်လှောင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်က ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပိုမိုပေါက်ဖွားစေနုိုင်ပါတယ်။ မှိုစွဲတဲ့ရောဂါမျိုးတွေဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမှိုစွဲတဲ့ရောဂါမျိုးကတော့ ဘယ်သူမှဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ဖူးသူများရဲ့အတွေ့အကြံအရ အတော်ဆိုးရွာကြောင်းလည်း Jamesကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အစိုဓာတ်နဲ့ အတွင်းခံပွတ်တိုက်မှုက ယားယံခြင်းက စတင်စေကာ pHပြောင်းလဲမှု ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ရင်တော့ […]